Iindaba-Funda ukuPakisha okuZinzileyo kwiimpawu ezaziwayo-kakuhle
Funda ukuPakisha okuZinzileyo kwiimpawu ezaziwayo-kakuhle
Eqhutywa luphuhliso oluzinzileyo, amagama amaninzi emizi kwimpahla yabathengi aphinda acinge ngokupakisha kwaye abeke umzekelo kuzo zonke iinkalo zobomi.
Izinto eziHlaziywayo kwakhona + iMathiriyeli eBiza uXanduva
"Kungakhathaliseki ukuba imveliso yesiselo ipakishwa njani, ayinakukhululeka nge-100% ekuxhomekeke kwizinto ezisekelwe kwifosili."- Ngaba oko kuyinyaniso ngokwenene?
I-Tetra Pak yaphehlelela upakisho lokuqala lwehlabathi olwenziwe ngokupheleleyo kwizinto ezivuselelekayo ngo-2014. Iplastiki yeBiomass esuka kwiswekile yommoba kunye nekhadibhodi ephuma kumahlathi alawulwa ngokuzinzileyo yenza ukupakishwa kwe-100% kuhlaziywe kwaye kuzinzile ngaxeshanye.
Ukunciphisa iplastiki +Ri-ecycling
Kushishino lwe-ayisikrimu, ngaba ukusonga iplastiki akunakubuyiselwa?
Ngo-2019, i-Solero, i-ice cream brand ye-Unilever, yenza umzamo onentsingiselo.Baye baphelisa ukusetyenziswa kweplastiki yokugoqa kwaye bafaka i-popsicles ngokuthe ngqo kwiibhokisi ze-PE ezinezahlulo.Ikhathoni zimbini zokupakisha kunye nesitya sokugcina.
Xa kuthelekiswa nokupakishwa kwemveli kwasekuqaleni, ukusetyenziswa kweplastiki kolu luhlu lweSolero kuncitshiswe ngama-35%, kwaye i-PE-coated carton nayo inokwamkelwa ngokubanzi yinkqubo yasekhaya yokurisayikilisha.
Ngaba ukuzinza kwebrendi kubaluleke ngakumbi kunegama lebrendi?
Kushishino lokutya nesiselo, ukwenziwa ngokutsha kweplastiki kunokwenziwa kwinqanaba kwaye kusetyenziswe kwakhona, ngaba oku kunokwenzeka ngenene?
NgoFebruwari ka-2019, ukupakishwa kwemveliso yaseCoca-Cola yaseSweden yatshintsha ngequbuliso.Igama loqobo lemveliso enkulu kwileyibhile yemveliso yadityaniswa yaba sisilogeni: "Nceda undivumele ndiphinde ndisetyenziswe kwakhona."Ezi bhotile zesiselo zenziwe ngeplastiki esetyenzisiweyo.Uphawu lukwakhuthaza abathengi ukuba baphinde basebenzise ibhotile yesiselo kwakhona ukwenza ibhotile yesiselo entsha.
Ngeli xesha, ulwimi lophuhliso oluzinzileyo lube lolona lwimi lolo phawu.
ESweden, izinga lokuphinda lisetyenziswe kweebhotile ze-PET limalunga nama-85%.Emva kokuba ezi bhotile zesiselo zihlaziywa ngokutsha, zenziwe kwiibhotile zesiselo se-Coca-Cola, i-Sprite kunye ne-Fanta ukuze zikhonze abathengi ngaphandle kokutya "iplastiki entsha" kwinkunkuma.
Ayipheleli nje ekuphuhliseni iimveliso, kodwa buqu nenxaxheba ekusetyenzisweni ngokutsha
Ukuba iitoti ze-powder zobisi ezingenanto emva kokusetyenziswa zingangeni kwinkqubo yokubuyisela ngokusemthethweni, iya kuchithwa, kwaye ngakumbi, iya kuba sisixhobo sabathengisi abangekho mthethweni ukwenza iimpahla zomgunyathi.Oku akuyona nje ingxaki yokusingqongileyo, kodwa kunye nobungozi bokhuseleko.Yintoni esimele siyenze?
I-Nestle yaphehlelela "umatshini wobisi ohlakaniphile onokuphinda usetyenziswe" kwivenkile kamama kunye nosana eBeijing ngo-Agasti ka-2019, ecinezela iinkonkxa zobisi ezingenanto zibe ziingceba zentsimbi phambi kwabathengi.Ngeenguqulelo ezintsha ezingaphaya kwezi mveliso, iNestlé isondela kufutshane neenjongo zayo zowama-2025 - ukuzuza i-100% yezinto ezipakishwayo ezinokuphinda zisetyenziswe okanye ezinokuphinda zisetyenziswe.
I-FRESH 21™ ngumqali we-MAP noLUSU oluzinzileyoisisombululo sokupakishayenziwe nge-paperboard - into enokuphinda isetyenziswe kwaye ihlaziyeke.Ipakethe entsha ye-21™ithetha ngomnqweno wabathengi wokuzinza kunye neplastiki encinci ngelixa ibonelelwa ubomi obude beshelufu yenyama entsha, ukutya okusele kulungiselelwe, imveliso entsha kunye nemifuno.I-FRESH 21™ MAP ye-MAP & ne-SKIN cardboard package ziyilelwe ukusebenza kakuhle kwemveliso efunyenwe ngeplastiki- ngokusebenzisa ii-denesters ezizenzekelayo kunye nezantya zemveliso ezihambelanayo.
Ngokusebenzisa i-FRESH 21™ ukupakishwa, kunye senza umahluko kwiplanethi kwaye samkela uqoqosho olujikelezayo.
ENTSHA 21™ by Itekhnoloji yeFUTUR.
Xa ii-brand zisenza imitsi emikhulu ekujonge phambili kwiinjongo zophuhliso oluzinzileyo, umbuzo ekufuneka iingcali zokupakisha zicinge ngawo utshintshile ukusuka ku-"indawo yokulandela" ukuya "kwindlela yokuthatha inyathelo ngokukhawuleza".Kwaye imfundo yabathengi yinxalenye ebaluleke kakhulu.